शरद ऋतु र जाडो टिनरको लागि ठुलो पर्दा | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
वालपेपर पेस्टको साथ घरपरिवार सर्दियों लालटेन
हजारौं र एक नाइट्स बाट हावा लालटेन
गृह बनाइएको लालटेन उनीहरूको विशेष आकर्षण छ। गर्मीमा उनीहरूले न्यानो छिमेकीहरूमा छतमा शिमर लगाउँछन्, शरद ऋतु र सर्दमा उनीहरूले पनि हाम्रो अपार्टमेन्ट वा भोज तालिकालाई पनि सजाय गर्छन्, भित्री पवन छैन।
सजावटको रूपमा शरद ऋतुमा हरिनिक्स
निस्सन्देह, हेर्नुहोस् घर बनाइएको लालटेन शरद ऋतु र सर्दमा ढोका बाहिर सजावटको रूपमा, उदाहरणको लागि, प्रवेशमा, ठूलो। उत्तम भाग भनेको यो सजिलो छ, एक आफैलाई एक वायुलाइट डिजाइन गर्नत्यसोभए बच्चाहरूले पनि यसको आनन्द उठाउन सक्छन् र धेरै अघिल्लो ज्ञान बिना प्रभावकारी नतिजा पाउन सक्छन्। यदि यो उत्प्रेरित छैन भने ...
Windlichter बस आफैलाई tinker
पतनको लागि गृह बनाइएको लालटेन
एउटा लागि घर बनाइएको शरद ऋतु पवन प्रकाश एक पटक तपाईंको मोमबत्तीको लागि उपयुक्त गिलास छ। यदि यो ठूलो लालटेन हो भने, तपाईं जार संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, तिनीहरू विभिन्न आकारहरूमा पनि उपलब्ध छन्। यहां सम्म कि एक जाम राम्रो तरिकाले सेवा गर्न सक्छन्।
यदि तपाईं केवल एक हुनुहुन्न भने यो सधैं राम्रो देखिन्छ घर बनाइएको लालटेन सजावटको लागी प्रयोग गरिन्छ, तर कम्तिमा तीन मा एकै प्रकारको टेबलमा वा विन्डो सिल्कमा।
के रूप मा मोमबत्तियाँ tealights हो - या गिलास को आकार को आधार मा - यहां सम्म कि थोडा मोटे स्तंभ मोमबत्तिहरु।
शरद गिलासको लागि तपाईंले म्यापल र सहको रंगीन पत्ती चाहिन्छ। यी केही दिन अघि सुकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईं ग्लास वरिपरी सरल सिर्ड सजावटीको साथ बाँड्न सक्नुहुन्छ। तर सावधान रहनुहोस्: कृपया पक्का गर्नुहोस् कि सूखी पातहरू मोमबत्ती आगसँग सम्पर्कमा आउन सक्दैनन्।
यस तरिकाले तपाईले पनि ग्लासमा हरेक अन्य सिजनलाई पनि सताउन सक्नुहुन्छ। जाडोको गत्ते ताराहरू जाडोमा, सुकेको र गर्मीमा सुकेको पात र जडीबुटीहरू। राम्रो कुरा भनेको त्यस्तो हो घर बनाइएको लालटेन लगभग एक पैसा खर्च!
निस्सन्देह तपाईले यसको लागि मोमबत्ती र ग्लास चाहिन्छ। यसबाहेक, तपाइँलाई पनि वालपेपरलाई पेस्ट र पेन्डिङको आवश्यकता पर्दछ। टेपटेनकेलिस्टमाथोडमा राम्रो छ भने सानो गिलास, जुन तपाईले सानो समूहमा राख्नुभयो, उदाहरणका लागि, क्रिसमस ट्रेमा।
को लागी अनुगमन पत्र बाट घरको टेलिभिजन शीत मोतीहरू जस्तै फ्रोडेड फूलहरू, ताराहरू वा सेतो रूखहरू हटाउँछन्। त्यसपछि तिनीहरूले भित्री रूपमा वा ओभरल्याप गर्दै छन् (राम्रो, यदि तपाईं केवल स्टारहरू वा केवल फ्रस्ट काटेर, उदाहरणका लागि) वालपेपर पेस्टमा पेस्ट गर्नुहोस्।
यद्यपि धेरै छोटो छोराछोरीले मात्र पट्टि वा पेटीका टुक्राहरू टाढ्न सक्छन्। शायद क्रिसमस फिट हुन रङ सेट गर्नुहोस्। र यदि यो रंगीन हो भने, यो केवल एक मौसम सबै हावाको प्रकाश हो!
यदि तपाईं आफ्नो लालटेन ग्लासको बाहिर बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं पनि प्रविधि पेपर संग काम गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, धेरै जवान छोराछोरीसँग यो निकै गाह्रो छ। यहाँ तपाईंलाई बियर चटाई, रंगीन कागज स्ट्रिप्स, चौंरीको कागज र चमकदार पत्थर चाहिन्छ। साथै, निस्सन्देह, कैंची, गोंद र tealights।
पृष्ठ शीतकालीन रंग
पृष्ठको शीतकालीन स्नोबाल लडाई
रौतहट, चैत 9